Qaramada midoobay oo walaac ka muujisay duqeymaha ka soo cusboonaaday Muqdisho – SBC
Qaramada midoobay oo walaac ka muujisay duqeymaha ka soo cusboonaaday Muqdisho
Posted by editor on Maarso 21, 2012 Comments
Qaramada midoobay ayaa muujisay walaaca ay ka qabto duqeymaha dib uga soo cusboonaaday magaalada Muqdisho ee caasimada ah, iyadoo baaq arinkaasi ku aadan u dirtey dhinacyada ku lugta leh colaadaasi.
Kuxigeenka afhayeenka Qaramada Midoobay Eduardo del Buey ayaa tibaaxay in Qaramada Midoobay ay ka walaacsan tahay duqeymaha dib uga bilowday Muqdisho, isagoo sheegay in looga baahan yahay dhinacyada colaadaasi ku legta leh inay joojiyaan bartilmaameysiga dadka rayidka ah iyo hay’adaha gargaarka.
Hadalkan oo uu jeediyey maalinmadii shaley Eduardo del Buey wuxuu ku soo aadayaa iyadoo duqeymihii ugu dambeeyey ay ku dhinteen lix qof oo rayid ah oo isku qoys ahaa oo ay ka mid ahaayeen caruur.
Sida ay sheegayso warbixin ka soo baxdey hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR duqeymahan magaalada Muqdisho ka dhacay waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyey tan iyo bishii August ee sanadkii hore.
Afhayeenka hay’ada UNHCR Adrian Edwards ayaa saxafiyiinta ugu sheegay magaalada Geneva in duqeymahan ugu dambeeyey ee maalinimadii Isniinta ay ku dhinteen lixda qof bartilmaameedku ahaa guri ay degan yihiin ciidamo dawlada KMG ka tirsan kaasi oo ku dhaw xarunta Madaxtooyada , laakiin madaafiicdu aanay gaarin halkii loo wadey oo waxay ku habsadeen goob ay ku jireen dad barakacayaal ah.
Warka ayaa wuxuu intaasi ku darayaa in habeenkii labaad madaafiic lagu duqeeyey xarunta madaxtooyada iyadoo madaafiic kale oo jawaab ah ay bixiyeen ciidamada midowga Afrika ka socda ee AMISOM.
Dhinaca kale kooxaha ka soo horjeeda dawlada KMG ayaa sheegay maalinimadii Isniinta inay sii wadi doonaan duqeymaha ay ku hayaan xarunta Madaxtooyada oo sidoo kale ay degan yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada, iyagoo adeegsanaya madaafiic iyo dad isqarixya.